March 2019 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
? အုန်းလွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) လည်ပင်းကြွက်သားတွေနာပြီး ခေါင်းလှည့်မရတော့တဲ့အခါ ? ကွန်ပျူတာရှေ့ အကြာကြီးထိုင်နေပြီး ထတော့မှ ဇက်ကြောတွေတောင့်ပြီး လှည့်မရပြုမရ ဖြစ်ဖူးလား? ရုပ်ရှင်ကို ရှေ့ဆုံးတန်းက မော့ကြည့်ပြီး လည်ပင်းကြွက်သားတွေ နာလာတာမျိုးကြုံဖူးလား? ချစ်သူမျက်နှာ တစ်ကမ္ဘာထင် ဖုန်းကိုတမေ့တမောငုံ့ကြည့် chat နေပြီး…
ကျောအောင့်ခြင်း ဆရာဝန်တွေအမြဲကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာ လူအတော်များများခံစားရတဲ့ဝေဒနာကတော့ ကျောပြင်အောင့်ခြင်းပါပဲ။ ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ ကျောကအောင့်အောင့်နေတာ မသက်သာဘူး ဆေးခန်းလေးဘာလေးပြရမလား ဓါတ်မှန်ပဲပြေးရိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။ ဟုတ်ပြီ ဒီတော့ကျောကဘာလို့အောင့်ရသလဲဆိုတာကို အကြောင်းအရင်းများစွာရှိတဲ့အနက် အဖြစ်များတဲ့အရာတွေကိုအဓိကပြောကြားသွားပါ့မယ်။ အောက်ပါအကြောင်းအရာများကြောင့် ကျောအောင့်နိုင်ပါတယ်- ၁။အဖြစ်များဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကျောပြင်ကြွက်သားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အလေးအပင် မ ရာတွင်ပုံစံမမှန်ခြင်း(သို့)အလေးများလွန်းခြင်း၊ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထားမမှန်ခြင်း၊နောက်ကျောကြွက်သားများအလုပ်လွန်ကဲ၍ဝန်ပိခြင်းတို့ကြောင့် ကျောပြင်ကြွက်သားများအပေါ်ဒဏ်ပိစေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ခါးဆစ်ရိုးများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၊ခါးဆစ်ရိုးအရွတ်ပြားများဒဏ်ဖြစ်ခြင်း။ခါးဆစ်ရိုးကြားအရွတ်ပြားများကျွံခြင်းမှာတော့ ကျောအောင့်ခြင်းသာမကပဲ…
လည်ပင်းကျီးပေါင်း မကောင်းကြောင်း ? ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကတော့ ကိုယ့်ကို လည်ပင်းဖက်ပေါင်းခဲ့ကြသူတွေက ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ အသက်ကလေးရလာလေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဝေးသွားကြတယ်။ ရောဂါတွေကတော့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောက်လာပြီး မိတ်ဖွဲ့ကြတော့တာပဲ။ မခင်ချင်လို့မရ။ မုန်းလည်း ရှောင်လို့မရ။ လည်ပင်းကျီးပေါင်းတဲ့။ သူလည်းပါတာပေါ့။…
အသည်းကင်ဆာ ကြောက်စရာ ကင်ဆာဆိုတာဟာ သိပ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီး ဒီဘက်ခေတ်တွေမှာ ပိုပြီးအဖြစ်များလာနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီထဲကမှ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာနေတဲ့ အသည်းကင်ဆာအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာဆိုတာ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ? အသည်းကင်ဆာဆိုတာမပြောခင်မှာ အသည်းမှာကင်ဆာဖြစ်ဖို့(၂)မျိုးရှိတယ်ဆိုတာ အရင်ပြောချင်ပါတယ်၊၊ အသည်းရဲ့ဆဲလ်တွေကိုယ်၌က စတဲ့ကင်ဆာနဲ့ အခြားကင်ဆာများမှကင်ဆာဆဲလ်များပြန့်နှံ့ပြီးအသည်းဆီကိုရောက်လာလို့ဖြစ်တဲ့ကင်ဆာဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အသည်းကနေဖြစ်တဲ့ကင်ဆာ(HCC-hepatocellular…
အသည်းခြောက်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ်လို ကုသသင့်လဲ? အသည်းခြောက်တယ်ဆိုတာဟာ အသည်းမှာရှိတဲ့ပုံမှန်ဆဲလ်တွေရဲ့နေရာမှာ အမာရွတ်တစ်သျှူးတွေနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရတာကိုအကြမ်းဖျဉ်းဆိုလိုပါတယ်။ အသည်းဟာရောဂါပိုး(သို့)အရက်(သို့)ဆေးဝါးအချို့(သို့)မျိုးဗီဇရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ဒဏ်ရာရရောင်ရမ်းပြီး ရောင်ရမ်းမှုကျသွားတဲ့အခါ ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေနေရာမှာ လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အမာရွတ်တစ်သျှူးတွေ အစားထိုးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကိုပဲ အသည်းခြောက်တယ်ခေါ်ကြပါတယ်။ အသည်းဘာကြောင့်ခြောက်သလဲ? အောက်ပါအရာတွေကြောင့်ခြောက်ပါတယ်- အဓိကအကြောင်းအရာတွေကတော့- ၁)အရက် ၂)အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး…
အရက်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တိုင်း ကိုယ်ထဲကဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ အရက်ဟာ လူကြီးလူငယ်မရွေး၊ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး နှစ်ခြိုက်စွာသောက်သုံးကြတဲ့အရာပါ။အရက်အမျိုးမျိုးရှိသလို၊ အရသာအမျိုးမျိုး၊ဈေးလဲအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မည်သို့ပင် ကွဲပြားနေပါစေ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှအရက်အပေါ်တုန့်ပြန်မှုကတော့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ သင်အရက်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်သွားမလဲ၊ခန္ဓာကိုယ်ကရော အရက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတုန့်ပြန်သွားမလဲဆိုတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သွေးကြောထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အရက်ပမာဏ(blood alcohol concentration – BAC )ရဲ့အကြောင်းအရင်ပြောပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ BAC…
အရေပြားတွေ ပက်ကြားအက်နေပြီဆို လူတိုင်းရုပ်ချောခြင်ကြပါတယ် ရုပ်ချော ဖို့က လှနေဖို့လိုပါတယ် လှတာဆိုတာ က အရေပြားတွေ ပက်ကြားအက် မွဲခြောက်နေရင် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော် မိန်းကလေးတယောက်က ဘယ်လိုမျက်နှာကျမျိုးပဲရှိနေပါစေ အသားအရည် ဝင်းပ စိုပြေနေရင် ကို လှပနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ လူတိုင်းသုံးတဲ့ facebookမှာတောင်…